Paul Scholes oo kaga digay kooxda Manchester United inay sameeyaan saxiixa Zidane – Gool FM
(Manchester) 07 Dis 2018.Halyayga kooxda Manchester United Paul Scholes ayaa kaga digay saraakiisha Red Devils, inay sameeyaan saxiixa Zinedine Zidane si uu noqdo macalinka cusub ee United-ka.
Dhinaca kale Paul Scholes ayaa tilmaamay in waayihii wanaagsanaa Zidane ee kooxda Real Madrid aan loogu tixgalin karin inuu guulo la gaari karo Manchester United.
Macalinka reer France ee Zinedine Zidane ayaa magaciisa lala xiriirinayay xiliyadii lasoo dhaafay kooxda Manchester United, si uu u noqdo badalka Jose Mourinho, kadib hoos u dhac weyn ee ku yimid Red Devils xili ciyaareedkan 2018/2019.
Hadaba wargeyska “Daily Mirror” ee dalka England ayaa sheegay in Paul Scholes uu su’aal ka keenay in Zinedine Zidane uu guulo la gaari karo kooxda Manchester United, kadib marka uu yimaado.
“Marka uu tagay Real Madrid wuxuu heestay koox geesiyaal ah ee ku soo guuleestay tartanka Champions League”.
“Waa shaqo gabi ahaanba ka duwan shaqooyinka kale ee gaar ah, sababtoo ah waxay u baahan tahay in lasoo celiyo kalsoonida koox aan si fiican u shaqeynin”.
Si kastaba waxaa xusid mudan in kooxda Manchester United ay ku jirto kaalinta 8-aad ee dhanka kala sareynta horyaalka Premier League iyadoo leh 23 dhibcood, kadib markii ay lasoo kulmeen 4 guuldaro iyo 5 barbaro, halka sidoo kale ay 6 kulan guul gaareen.